Departemantan'ny ampahany - Ellicott Dredges
Miambina hatrany ny fizarana dredge izay mora tanterahina eo am-pitadiavanay sy mandefa mivantana any amin'ny toerana rehetra eto amin'izao tontolo izao isika. Tsara vintana fa manana toeram-panamboarana izay misy eo amin'ny campus. Io dia mamela antsika hamokatra ampahany amin'ny kalitao avo lenta ahafahana mameno ny fangatahan'ny mpanjifantsika.
Ohatra, ny trano fanamboarana dia ahafahantsika:
Manamboatra ampahany amin'ny trano ho an'ny antoka azo antoka.
Tazano fizarana dredge betsaka ao amin'ny trano fitehirizanay.
Manomeza fandefasana eo noho eo amin'ny ankamaroan'ny faritra na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao.
Manolora fanohanana maharitra aorian'ny fivarotana manana fahalalana.
Mifandraisa amin'ny departemantan'ny faritra
Parts Dredge Cutterhead
Series 670HP Dragon® Dredge
Series 870HP Dragon® Dredge
Series 1270HP Dragon® Dredge
Series 2070HP Dragon® Dredge
Fizarana Dredge Tohatra mivily